Tirada diyaaradaha gantaalka lagu dhuftay 50-kii sano ee la soo dhaafay | Hangool News
Sheegashada Iran ayaa timid maalin un ka dib markii madaxa hey’adda duulimaadyada rayidka ee Iran uu beeniyay in diyaaradaas uu soo riday gantaal ay ciidanka Iran ku tuureen.
Halkan waxaan idin kugu soo gudbineyenaa diyaaradihii la soo riday 50-kii sano ee lasoo dhaafay – AFP.
Octoobar 4, 2001: 78 qof oo inta badan ahaa muwaadiniin u dhashay Israa’iil ayaa la dilay, ka dib markii diyaarad ay ku safrayeen oo lagu magacaabay Siberia Airlines, oo ka duushay magaalada Tel Aviv, ay hawad ku qaraxday xilli ay mareysay badda madow. Waxay diyaaraddaas ku sii jeeday Novosibirsk.
Febraayo 21, 1973: Diyaarad duulimaad oo ay lahayd Dowladda Libya, oo nooceedu ahaa Boeing 727, kana duushay magaalada Tripoli, ayaa saxaraha Sinai ku burburtay, ka dib markii ay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa’iil. Diyaaraddaas waxay ku sii jeeday magaalada Qaahira
Dowladda Israa’iil waxay sheegtay in ay duqeeyeen diyaaradaas ka dib markii ay diiday in ay dagto, waxaana ay ku qaldeen diyaar dagaal oo ay moodeen in ay soo weerartay.